Costa Dorada - Zvaunofanira kuona uye zvekuita pazororo rako rinotevera | Kufamba Nhau
Susana godoy | 08/04/2021 11:03 | Nzvimbo dzekushanya
Ungade here kufamba famba uchifamba neCosta Dorada? Iyo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzeSpanish jogirafi uye zvakare yeimwe inonakidza kwazvo. Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweBarcelona uye ine mahombekombe asingaperi pamwe nenzvimbo dzekutandarira dzinoita kuti dziwedzere kunakidza, kana zvichibvira.
Asi ichokwadi kuti Iyi nharaunda inopfuura mahombekombe uye nekudaro, iyo tsika nzira, izere nenyaya uye nyangwe ngano, zvakare inoenda nezvake. Naizvozvo, haugone kupotsa zvese zvaunogona kushanyira uye nezvaungaite pazororo rako. Uchave nazvo zvese pamaoko ako! Wakagadzirira kuinakidzwa here?
1 Tarragona, imwe yematanho akakosha ekutanga kuCosta Dorada
2 Kufamba uchitevedza mahombekombe ayo
3 Resort kana Kambi?
4 Kushanyira kuSalou theme park
5 Hupenyu hwaGaudí muReus
6 Isu tinosvika tichienda neCistercian Nzira!
7 Enda kuEbro Delta
Tarragona, imwe yematanho akakosha ekutanga kuCosta Dorada
Kune nzvimbo dzinoverengeka dzakafukidzwa neCosta Dorada, asi pasina kupokana, Tarragona inotora nzvimbo yekutanga. Tinogona kutaura nezvake izvozvo Inotaridzika kunge yakavhurika yemhepo miziyamu, nekutenda kune zvese zvainazvo zvekutiratidza mune anonzi matongo eTarraco. Tichatora nhanho dzinoverengeka kudzoka munguva kuti tiwane mabhiriji, shongwe dzakadai seyaScipios uye kunyangwe rusvingo rwayo rwekare, rwusinga dzokere kunguva dzevaRoma. Zvese izvi zvinoumba imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha dzekuchera matongo, nematombo chaiwo, ayo anofanirwa kuzivikanwa. Pamusoro peizvi, haugone kupotsa kushanya kwako kuCathedral yeSanta Tecla, iyo Mirador del Mediterráneo kana iyo Port.
Kufamba uchitevedza mahombekombe ayo
Takabva pakufamba nenguva kuti tidzokere kuchazvino nekuona mahombekombe ayo ese. Nekuti inzvimbo inogara jecha rejecha richagara riripo, rakasanganiswa nemvura dzemakristaro idzo dzavanodanana nadzo zvakanyanya. La Pineda ndeimwe yemahombekombe akakwana, anopfuura makiromita maviri kureba kwaunogona kudzidzira kufambisa kana kudhiraivha. Cala Fonda, inozivikanwawo seWaikiki, iri kuchamhembe kweTarragona uye ndeimwe yeakanyanya kunyarara. Nepo Santes Creus Beach, ipo painoonekwa uye nekuratidzwa kwegungwa, ichakufadza. Kwekuswera kunze nemhuri uye wakakomberedzwa nemapaini masango iri Cap Roig Beach.
Resort kana Kambi?
Kunakidzwa kwerwendo dzimwe nguva kunotanga nekugara kwatakatsvaga. Nekuti kana isu tikataura nezve mahombekombe anoumba ino nzvimbo, nzvimbo dzekutandarira, dzine ruzivo rwakanyanya, dzichava ivo protagonists. Asi kana iwe uchida kutsvaga chimwe chinhu chine mari, chinoshanda uye chemhuri yese, unogona zvakare kusarudza Dzika musasa Costa Dorada. Nenzira iyi iwe uchagara uri munzvimbo yakadzikama uyezve, unogona kunakidzwa nemaruwa uye kumahombekombe kana iwe uchinzwa senge nese masevhisi aripo.
Kushanyira kuSalou theme park
Nekuti nekuwedzera kumahombekombe uye kuzhinji kwekushanya, Salou zvakare ane iyo PortAventura World theme paki. Saka inogona kuve imwe yeinopfuura yekushanyirwa kwekushanyirwa, kunyanya kana ukaenda nevana vako. Nekuti neiyi nzira iwe unogona kunakidzwa nezvose zvinokwezva semhuri uye kwavari chichava chinhu chinokurudzira. Ehe, Salou zvakare inokupa iwe nzvimbo dzakasarudzika seTorre Vella nhare, kana iwe uchida kunakidzwa neyakanyanya tsika chikamu chenzvimbo.
Hupenyu hwaGaudí muReus
Kana iwe zvakare haugone kupotsa kufamba kuburikidza neReus, sezvo uri mucherechedzo weGaudí uye zvese zvinobatanidza. Sezvo kwemakore akati wandei aigara munzvimbo ino uye nhasi chiyeuchidzo chakakura chemufananidzo, mune imwe neimwe yemakona ayo. Unogona kunakidzwa yaive imba yake pamwe neGaudí Center, inova nzvimbo yekududzira iri muPaza del Ayuntamiento. Mariri, iwe unogona kuwana zvemunhu zvinhu zvemufananidzo uye zvakare, pane kamuri ine zvinyorwa zvebasa rake.
Isu tinosvika tichienda neCistercian Nzira!
Iyo nzira iwe yaunogona kuita kungave netsoka kana nebhasikoro kana iwe uchinzwa uchidaro zvakanyanya. Mune ino nzira iwe unayo zvitatu zvinotenderwa kumira izvo zviri zvitatu zvemamongi: Vallbona, Poblet neSantes Creus. Iyo inopfuura yakakwana nzvimbo kuti uwane hupfumi hwayo hweapurani, iri pachena, asi zvakare mune gastronomy uyezve, mune hunyanzvi. Nekudaro, iyi ndeimwe yesarudzo idzo isu patinoshanyira Costa Dorada, zvakare iri munzira yedu.
Enda kuEbro Delta
Kushanyira Delta del Ebro park ndechimwe chezvakakosha pfungwa kufunga. Sezvo mairi iwe uchawana akawanda marudzi emhuka. Asi pamusoro pezvo, inokupa imwe yezviitiko zvinofadza zvaunogona kunakidzwa nekurangarira hupenyu hwako hwese: Rwendo rwechikepe kuburikidza neEbro Delta. Zvakanaka, iwe unogona kuwana mukanwa merimwe rerwizi rwakakosha, uchifarira zvakasikwa nemabhishi aro. Iwe une migwagwa yakatenderedza awa, kusvika rinenge zuva. Ndeipi nharaunda iwe yauri kutanga yako zororo mune?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Nzvimbo dzekushanya » Kufamba uchitevedza Costa Dorada: Chii chaungaone uye zvekuita